818 net celebrity nis homestay c Isitayela seNordic sobunewunewu esahlula-hlula-kwinqanaba lokuhlala ecaleni kwepaki ephakathi - I-Airbnb
818 net celebrity nis homestay c Isitayela seNordic sobunewunewu esahlula-hlula-kwinqanaba lokuhlala ecaleni kwepaki ephakathi
I-loft yonke sinombuki zindwendwe ongu缘
U缘 unezimvo eziyi-22 zezinye iindawo.
818 Internet celebrity ins homestay ibekwe kweyona ndawo iphumeleleyo yorhwebo kumbindi weDongsheng. Inefanitshala entsha ceke yobunewunewu, eyi-88 kuphela enamagumbi aphakamileyo anebhedi, ithiyetha eyakhelweyo ekhaya, kunye nenethiwekhi engenazingcingo ekhawulezayo ukunika iindwendwe amava ahlukeneyo okubonwayo.
Iifestile ezinkulu ezisuka kumgangatho ukuya eluphahleni zendlu zinika ukukhanya kwelanga okuninzi emini, namehlo avulekileyo.Ngokuhlwa, unokuhlala phambi kwefestile uze uncokole ngobomi, ungcamle iwayini ebomvu kwaye uphumle.
Izothutho ezilula, indawo yokupaka yasimahla, kumgangatho osezantsi kukho ivenkile enkulu iWal-Mart RT-Mart, indawo yokuthenga, isitrato sokutya, imakethi yasebusuku, kufutshane nepaki yesikwere, isikolo, kumgangatho osezantsi kukho ivenkile enkulu yeAnda yeeyure ezingama-24, ikhemesti, yasekhaya. ezizodwa
Indlu yonke ibonelela ngezindlu zangasese zexesha elinye kunye nebhedi ephezulu, kuphela ukunika indawo yokuhlala etofotofo neshushu kuhambo lwakho.
Indlu yindlu ephakamileyo, enemigangatho emibini phezulu nangaphantsi, inamagumbi okuhlambela ahlukeneyo, alula kakhulu
Indlu esezantsi ikufuphi nesikwere esikhulu, Ikezhao Park, kunye ne-night market snack street. Ikulungele kakhulu ukutya, ukusela, indawo yokuhlala kunye nokuhamba. Kukho iivenkile ze-Anda zeeyure ezingama-24, iibhanki, iikhemesti, izikolo, kunye neendawo zasekuhlaleni. ezizodwa.
Umbuki zindwendwe ngu- 缘
Ungandifowunela nanini na ukuba unento, ifowuni iyafana